MALUNGA NE-JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD | JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD
Jiangsu TISCO INDUSTRIAL CO., LTD yasekwa ngo-2008, ngobungcali ekuveliseni insimbi coil, ipleyiti steel stainless, umbhobho steel stainless, bar steel stainless , iinkangeleko steel stainless kunye neemveliso ingxubevange. Kule minyaka ili-12 idlulileyo, Icandelo leTISCO iseke ubambiswano lobuchule kunye namashishini amaninzi awaziwayo anyukayo nawasezantsi anje ngala: IMASTEEL, BAOSTEEL, TISCO, ZPSS, RIZHAO, JIGANG, SHOUGANG IQELA, SSAB, JISCO. Sijongana neemveliso ze-alloy kunye neemveliso zensimbi ezingenasici ezingenasici zeemveliso eziphambili zehlabathiUthotho lweInconel, iMonel Series, iHastelloy Series, iTitanium kwaye nangokunjalo.
Emva kweminyaka eli-12 yophuhliso olukhawulezileyo, i-TISCO Industrial iye yaba yinkampani yentsimbi ebanzi yanamhlanje egxile ekuqhubeni, ukuthengisa kunye neenkonzo zobugcisa kwicandelo leemveliso zentsimbi engenasici. Umzi mveliso weTisco unezixhobo eziphambili zokwenza intsimbi ezibonelela ngamaqonga okulungisa:ukusika, ukugaya, ukwenza, ukuwelda, ukunyanga ubushushu, ukumatshini, kunye nokutshiza. Ngapha koko, iTisco Industry ineziko langoku lokuvavanya oomatshini kunye neekhemikhali ukuqinisekisa iimveliso ezifanelekileyo.
Jiangsu TISCO Industrial umisele amaziko eenkonzo processing 10 Wuxi, Wuhan, Hangzhou, Tianjin, Taiyuan, Zibo, Jingjiang, Tai'an, Jinan and Jiaxing e China. Okwangoku, uMzi mveliso weTisco ugubungela indawo ye150,000Kwaye unayo 1,300 abasebenzi. I-Tisco izimisele ukuba yi "ukwenziwa kwesinyithi kunye neziko lonikezelo loshishino lokuvelisa"kwaye"itshekhaphu levenkile enkulu yentsimbi"E-China. Emva kokwenza izinto ezintsha kunye nokufuna ukugqwesa, i-Tisco Industry inabanikezeli abaninzi abadumileyo kwihlabathi jikelele Iitoni ezili-100,000 yentsimbi engenasici kwisitokhwe minyaka le.
Ishishini lethu liyanda ngenxa yophuhliso oluqhubekayo kule minyaka, kwaye ngoku simisela inkampani entsha egama linguJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd. iJiangsu Joyina i-Industrial Co, Ltd ngoku lilisebe leJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd.